2017 - Shop
Shop > All Articles > 2017
“နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျရမယ် ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက် ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး” ဆိုသည့် ယူဆချက် တခု ကို ရိုက်ချိုးကြည့်ရအောင်။0304
The KaungHtet December 29, 2017 7:46 am February 21, 2020
လူအများစုက နှစ်သစ် ရည်မှန်းချက် တခုတော့ ထားလေ့ရှိကြတယ်။ ဘာသာစကား အသစ်တခုသင်မယ်၊ ချစ်တဲ့သူတွေကို အချိန်ပိုပေးမယ်၊ ရှိရင်းစွဲ ဝိတ်ထက်ကျရမယ် ဆိုတာမျိုး အများကြီးပဲ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီ New Year Resolution အမျိုးမျိုးထဲကမှ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုသူ တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက် ကအမြင့်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
“Weight loss is the least likely New Year’s Resolution to be achieved,” Or is it?????0317
The KaungHtet December 29, 2017 7:44 am December 29, 2017
There are many new year resolution: lose weight, learnanew language, spend more time with the loved ones. Among them,alarge group of people set the goal to lose weight. Every January, they assume they will lose pounds if they promise themselves to join the gym. According to the article that reported by BBC (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2779031.stm), most diets just don’t work. Dr. Susan Peirce Thompson, New York Times Best-Selling author said “Weight loss is the least likely New Year’s Resolution to be achieved”. It is sad to hear about this kind of news. But there is always hope and redemption even in the darkest time.
ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အသားအရေခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ0376
The KaungHtet December 22, 2017 10:06 am December 22, 2017
Winter-friendly Skin Care Hacks0314
The KaungHtet December 22, 2017 9:39 am December 22, 2017
Winter is already here! It means that we need to swap some of our daily skin care products and take …
JCGV အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း Shop.com.mm Black Friday မှာ ထပ်ဆောင်းလျှော့ဈေးတွေ ရယူလိုက်ရအောင်…၂၀၁၇ ခုနှစ် Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်အတွင်း Shop.com.mm နှင့် JCGV တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်0341
The KaungHtet November 28, 2017 7:58 am November 28, 2017
JCGV ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် အထူးသတင်းကောင်း…မကြာမီမှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့် Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအတွင်း Shop.com.mm မှ JCGV နဲ့ပူးပေါင်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခု ယူဆောင်လာပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ Shop.com.mm နဲ့ JCGV အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ တို့ပူးပေါင်းပြီး …
Watch movie, Get voucher code & Enjoy Shopping : Collaboration of Shop.com.mm & JCGV during Black Friday 20170371
The KaungHtet November 28, 2017 7:50 am November 28, 2017
Good news for movie lovers! Black Friday is coming very soon and we are so excited to launch our special …
Black Friday 2017 ကာလအတွင်း Facebook မှာ QR Code scan ဖတ်ပြီး အပို ၅၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေးကူပွန် ရယူလိုက်ရအောင်…0305
The KaungHtet November 22, 2017 3:17 am November 22, 2017
တစ်နှစ်တာရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Black Friday 2017 ပွဲဟာဆိုရင် မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Black Friday 2017 ပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ၉၀% အထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ …
How to get extra 5,000 Ks Discount with QR Code during Black Friday 20170338
The KaungHtet November 22, 2017 3:16 am November 22, 2017
Shop’s Black Friday which is the biggest online sale campaign of the whole year is about to start. Commencing from …
Shop.com.mm ရဲ့ Black Friday 2017 ဈေးရောင်းပွဲတော်0274
The KaungHtet November 20, 2017 3:53 am November 20, 2017
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးစတင်ဖို့ ၂ရက်သာလိုပါတော့တယ်။ Black Friday နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားပြီးတဲ့သူတွေကလဲ တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ …
The most thrilling part of 2017 is just around the corner. Shop’s Black Friday 2017 is exactly two days to …